Banyere Anyị - Zhangjiagang Riching Machinery Co., Ltd.
Zhangjiagang Riching Mahcinery na - arụpụta ma na - erekwa igwe, ọ kachasị ọkachamara na igwe plastik. Ndị na-etinye ego anyị na-arụ ọrụ n'ọhịa nke ụlọ ọrụ plastik ọtụtụ afọ. Anyị na-etinye aka n'ire ndị ahịa anyị 'plastic eqiupment, na akụkụ ahụ mapụtara na akụrụngwa.
Azụmaahịa anyị gụnyere ịsa plastik na imegharị ihe maka ihe eji eme ihe, onye na-emepụta ihe, onye na-ekpochapu ihe, igwe na-akụda, akụkụ ndị ọzọ maka igwe igwe wdg.
- Anyị uru -
Teknụzụ & ọrụ
Anyị na-agbakọta ndị nwere ahụmahụ engineer na ubi nke plastic industy, Anyị na-ọma eductated nwoke na-ere ahịa na onye ọrụ mgbe ire, ,nye undertand technology nke ọma, na-ezi nkwurịta okwu nkà na ike okwu ike na e dere & kwuru English.
Akwụ ụgwọ & ọnụahịa
Anyị (ndị ọchụnta ego niile) na-enye ngwakọta ngwakọta maka akụkụ ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ, na-ekerekwa n'ahịa ire ere na akụrụngwa mmadụ na injinia, nke na-ebelata ọnụahịa mmepụta, ụgwọ njikwa yana ire ahịa nke ukwuu.
Ebumnuche anyị bụ iwulite ikpo okwu na-atọ ụtọ, ikpo okwu ọrụ na teknụzụ na-akwado ikpo okwu maka ndị ahịa n'ọhịa ụlọ ọrụ plastik. Nyere mkpachị aka iji belata ọnụahịa ịzụta, njikwa njikwa, inye aka iji zụta site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China. Mee otu akwa dị n'etiti ndị ahịa na ndị na-etinye ego anyị (obere ụlọ ọrụ mmepụta ihe)
Anyị nwere igbochi evalution usoro on quality level.For ọ bụla zuru ezu akụrụngwa tupu nnyefe, Anyị nwekwara anyị engineer iji nyochaa.
Anyị na-achọpụta anyị ọ bụghị naanị dị ka onye na-emepụta ihe na onye na-ere ahịa, payaa ntị na kamakwa ndị na-enyere ndị ahịa aka inweta akụrụngwa qulaity na ọnụ ala dị ala, hapụ ndị ahịa na-enweghị nchekasị mgbe ha zụrụ.
1.Gwapụta ọnọdụ injinia chọrọ maka nrụnye
nke igwe & akụrụngwa
2.Nye aka na-ekwuputa oge mmepe nke
igwe na onye ọrụ
3.Providing enyemaka na oru ọnọdụ, ịghasa Nchikota
na agwa gbọmgbọm dị mkpa maka ngwaahịa
1.Prode na ebe ọrụ aka na ntinye, ntinye na ọzụzụ
2.Filing zuru ezu banyere ozi ndị ahịa
3.Prode ọrụ nlekọta ogologo oge na akụkụ ahụ mapụtara
4.Gi inye nkwado ndị ahịa maka ndị ahịa maka ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ
5. Na-enye mmezi n'efu maka otu afọ